यी हुन् विश्वकपमा अन्तिम १६ मा पुग्ने टोली, कसको खेल कोसँग ? – www.agnijwala.com
यी हुन् विश्वकपमा अन्तिम १६ मा पुग्ने टोली, कसको खेल कोसँग ?
१५ असार– विश्वकप २०१८ को अन्तिम १६ मा पुग्ने टोलीको टुंगो लागेको छ । अन्तिम १६ मा केही नयाँ अनुहार देखिएका छन् । पूर्वच्याम्पियन जर्मनीजस्ता टोली बाहिरिएका छन् । अब पिश्वकपमा नकआउन चरणका खेल हुनेछन् । यस्ता छन् विश्वकपमा अज्तिम १६ मा स्थान बनाएका टोली र तिनको खेल तालिकाः
समूह एबाट उरुग्वे र रसियाले विश्वकपको अन्तिम १६ मा स्थान बनाएका छन् । उनीहरुको प्रतिस्पर्धा मसूह बीका विजेता स्पेन र पोर्चुगलसँग हुनेछ । ए विजेता उग्वेले बी उपविजेता पोर्चुगलको सामना गर्नेछ । त्यस्तै, बी विजेता स्पेन ए उपविजेता रसियासँग भिड्नेछ ।
माथि जस्तै, समूह सी विजेता फ्रान्स डी उपविजेता अर्जेन्टिना र डी विजेता क्रोएसिया सी उपविजेता डेनमार्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
समूह इ तर्फ समूह विजेता ब्राजिलले एफ समूह उपविजेता म्याक्सिकोको सामना गर्नेछ । त्यस्तै, एफ विजेता स्वीडेनले इ उपविजेता स्वीजरल्याण्डको सामना गर्नेछ ।
समूह जी विजेता बेल्जियम एच उपविजेता जापान र एच विजेता कोलम्बिया इ उवपविजेता इग्ल्यांडसँग भिड्नेछन् ।
यो चरणमा विजेता टोली सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछ ।